प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको ‘बाघ’ हुन् – Karnalikhabar
प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको ‘बाघ’ हुन्
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा आवद्ध युवा नेता मंगलसिंह प्रजाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली राजनीतिको ‘बाघ’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एक ‘स्टार अनलाइन’ युट्युव च्यानलमा अन्तवार्ता दिने क्रममा प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको ‘बाघ’ भएको बताएका हुन् । त्यस्तै माओवादी पार्टीले अहिले सम्म कहिल्यै राष्ट्रघाति काम नगरेको उनले बताए ।
उनले भने– पत्रकार मित्र सुन्नुस् त प्रचण्ड भनेको ‘बाघ’ हो । कसैले घोक्रे ठ्याक लगाउँदैमा लाग्न, आज देख्नु भएन ‘प्रचण्ड’संग न्यू खोज्ने कहाँ बसे ? ‘बाघ’ भनेको कुरा बुझ्नु भएन ? ‘बाघ’ जस्तै हो । ‘बाघ’ बराबरको मान्छे हो ‘प्रचण्ड’ । उ ‘प्रचण्ड’संग दिमाग पनि धेरै छ, जहाँ झुक्नु पर्ने ठाउँमा झुक्छ, यदि ‘प्रचण्ड’लाई पेल्न खोज्यो भने भित्ता पुर्याइदिन्छ हर्नु भएन त्यहाँ ? ‘प्रचण्ड’संग न्यू खोज्दा आज के भो ?
त्यस्तै माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका लेखराज भट्ट रामबहादुर थापा ‘बादल’ टोपबहादुर रायमाझीहरु कुहिएको फर्सी भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनले भने– तिनीहरु कुहिएको फुर्सी हुन् यार, कुहिएको फर्सीको कुरा गर्ने यहाँ ? उनीहरु माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले जानुको कारण पद, पैसा र पावर रहेको आरोप लगाए ।
प्रचण्डको हालत खराब नभएको बरु नेपालको राजनीतिमा ‘प्रचण्ड’ बिच माख्खो नमर्ने दाबी समेत गरेका छन् । उनले भने– ‘प्रचण्ड’को केही हालत भएको छैन्, अहिले सम्म यो हाम्रो देशको स्थिति यसको राजनीतिक रुपमा ‘डडु पन्यौं’ ‘प्रचण्ड’ बिना कुनै एउटा माख्खो मर्ने वाला पनि छैन् । म ठोकुवा गरेर भन्दिन्छु, अब पनि यदि ‘प्रचण्ड’ बिना कुनै माख्खो मर्छ भने अर्को युद्ध हुन्छ ।
उनले थपे– १० वर्ष यु द्ध लड्न चानचुने विषय होइन, माओवादी केन्द्रको इतिहास छ र १७ हजारको बलिदान त्यत्तिकै भएको होइन । माओवादी केन्द्र भनेको चानचुने पार्टी होइन । कसैले सिध्याएर सिधिने, कसैले हाम्रो पार्टीको मान्छेलाई छुएर त देखाओस् ।
अघिल्लो - घ्यु कुमारी यसरी प्रयोग गर्न जान्ने हो भने दर्जनौं रोगबाट मुक्त, सुन्दरतामा चमत्कार
नायिका स्वस्तिमा खड्काले पल शाह प्रकरणमा भनिन्- ‘अब हिम्मत हार्नुहुँदैन’ - पछिल्लो
शिक्षालाई जोड दिदै रंगेली नगरपालिका
काठमाडौंमा ४८ हजार बढी मतका साथ बालेन अग्र स्थानमा